XOG XASAASI: Maxaa ka ogtahay in Saadaq John uu hoggaaminayay weerarkii hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Maxaa ka ogtahay in Saadaq John uu hoggaaminayay weerarkii hoyga...
XOG XASAASI: Maxaa ka ogtahay in Saadaq John uu hoggaaminayay weerarkii hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur?
Saadaq Cumar Xasan (Saadaq John)
Muqdisho (Halqaran.com) – Iyadoo ay soo baxeen wararka sheegaya in eedeymo ka dhan ah Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir, Saadaq Cumar Xasan (Saadaq John) loo gudbiyay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey, laguna saleeyay in uu horkacayay weerarkii 17-kii bishii December ee sanadkii 2017 lagu qaaday hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho ayaa waxaa la shaki geliyay in uu isagu hormuud u ahaa weerarkaasi. Kooxda dabagalka cunaqabateynta hubka ee Somaliya & Eritrea u qaabilsan Qaramada Midoobey (Monitoring Group) ayaa warbixin ay qortay daba-yaaqadii sanadkii hore u gudbisay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey, waxaana warbixinta qaybteeda lagu sheegay in Saadaq Cumar Xasan (Saadaq John), uu horkacayay weerarka lagu qaaday hoyga Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, iyadoona ay ku dhinteen illaa shan qof oo ilaaladiisii ka mid ahayd.
Abukaate Jeremt Schulman oo ah abukaataha difaacaya Saadaq John, una dhashay dalka Mareykanka ayaa beeniyay in ninkaasi uu wax lug ah ku leeyahay weerarkaasi, waxaana uu ku andacooday amarka lagu weeraray hoygaasi in uu bixiyay Taliska Sare ee Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka (NISA).
Cabdullaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe) oo xilligaa ku magacawnaa Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida & Sirdoonka Qaranka ayaa iska fogeeyay in ay iyagu bixiyeen amarka lagu weeraray hoygaasi. Sanbaloolshe ayaa warkan ku sheegay wareysi uu siiyay VOA.
Korneyl Cabdullaahi Cali Macow oo ka tirsan Saraakiisha Hay’adda Nabad Suggida oo xilligii uu weerarka dhacaayay ku sugnaa Taliska NISA ayaa beeniyay in amarkaasi uu ahaa mid Taliska ka soo baxay.
Korneyl Cabdullaahi Cali Macow oo la hadlay Radio Kulmiye ayaa sheegay in Saadaq John uu ahaa ninkii warqadda ka soo baxday Xeer Ilaalinta u geeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, isagoona su’aal ka keenay baahida keentay in la weeraro hoyga Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir.
Korneyl Macow ayaa sheegay in Saadaq John uu u muuqday mid amar ka haystay dhinaca Madaxda Qaranka, isla-markaana ay ka faa’iideysteen isagoo aan khibrad badan u lahayn ciidamada iyo hannaanka ay u shaqeeyaan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Saadaq John oo xilligaa ku magacawnaa Taliyaha Nabad Suggida Gobolka Banaadir uu hormuud u ahaa Ciidankii Nabad Suggida ee weerarka gaystay, isla-markaana gacanta ku soo dhigay isagoo dhaawac ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Warar ay helayso mareegta Halqaran.com ayaa sheegaya Saadaq Cumar Xasan (Saadaq John) oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee aadka loola xiriiriyo Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Khayre uu amarkaasi ka helay Xafiiska Ra’iisal Wasaare Khayre.
Wararka ayaa waxay intaa ku darayan inaanu Saadaq John ku dhiiran kari lahayn weerarkaasi, haddii aanu markaasi gacan gudaha ah ka haysan Aqalka Madaxtooyada ee Villa Somalia.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dhawr jeer Warbaahinta ka weeraray Saadaq John, waxaana xusid mudan in billo ka hor uu Dowladda Turkiga ku dhaliilay laba wajiilenimo, ka dib markii ay billad sharaf guddoonsiiyay Saadaq John, oo uu ku eedeeyay gacan ku dhiigle dilay shan ka mida ilaaladiisa.
Isku soo wada duub, waxaan jirin tallaabo meesha looga saari karo in Saadaq John uu horboodaayay Ciidankii Nabad Suggida ee xilligaa weerarka ku galay hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku yaala Degmada Wadajir, gaar ahaan agagaarka Garoonka Aadan Cadde.
weerarkii hoyga Cabdiraxmaan Cabdishakuur